Dawacadda Waree Waxaraha Ha Kaaleyse!
Faaladii: Ikraam Cali-kaar
Waxaan qiyaasayaa in badan oo adinka kamid ah iney isweydiin doonaan waxa aan ula jeedo cinwaanka kor ku xusan iyo sababaha dhaliyeyba sidoo kale qaar badan ayaa oran doono talow gabdhu ma maanta ayey miyigii iyo duur joogtii rabtaa iney nooga sheekeyso wax kalaba daaye !.
Dawacaddu waxey weligeed caan ku aheyd iney ugaarato xoolaha ay ka awood badan tahay ee reer miyigeenu dhaqdo ee ariga,idaha iyo waxaraha, dhamaantoodna waa kuwa ugu liita ee ku jira xoolaha la dhaqdo ee dawacadu ka adagtahay kasokow habar dugaaga kale ee iyagana halis ku ah naftooda iyo dadka dhaqanayaba.
Hadaba inkastoo ka sheekeynta miyeegenna, xoolaheenna iyo ugaarteenna ay yihiin kuwa ugu qiimo badan marka laga sheekeynayo taariikda dalkeenna, hadana macnaha aan qalinka u soo qaatay maahan inaan ka faalloodo dawaco iyo habar dugaag balse murti mugweyn oo dahsoon ayaa igu kaliftay inaan qalinka qaato.
Hadal badani haan ma buuxiye, hadaba guud ahaan shacuubta caalamka ku dhaqan waxa ay leeyihiin cadow u gaar ah, halis ku ah jiratoonkooda iyo danahooda gaar ahaaneed, sidoo kale wuxuu cadowgaasi mararka qaar awooda inuu kaa dhigo mid aan weligiis hormar gaarin isagoo kugu dilaya sababo badan oo isaga u gaara , sida dalka Ciraaq oo maanta tusaale caalamka oo dhan u ah.
Dalkeenna oo isagana kamid ah shacuubta aan xusay ee cadowga gaar ahaaneed leh, waxuu soo maray marxalado kala duwan tan iyo markii gumeystihii foosha xumaa kala qeybiyey dhulkii la oran jiray Somaliweyn ee hal qarni ka hor , aaqirkiina keentay in markale afartan iyo sadex sanno kadib ay hoos timaado cadowgeeda gaar ahaaneed ee weligii jeclaa burburka qarankooda.
Tan iyo markii qaran jabku ku dhacay ummadda soomaaliyeed waxaa ay daaha ka rogtay miciyaha qarsoon ee cadowgooda hoosta ku watay,waxaana ay cadowgaasi oo xeelado badan adeegsanayo uu helay fursado in dalka iyo dadka soomaaliyeed ku sameeyo xadgudub iyadoo aan jirin awood mideysan difaacda xaqa muwaadinka soomaaliyeed.
Dowladda Itoobiya oo aanu ogsoonahay amaba aysan jirin cid looga sheekeynayo cadaawada gaamurtay ee ay uheyso dalka jaarka la ah ee Soomaaliya ayaa waayahu baday iney u arimiso mushkiladaha qabiilka ku saleysan ee Soomaalida lugu ibtileeyey xalna ay keeni waayeen kuwa gacmahooda ku abuuray mushkiladaasi “ileyn dadku waa soomaali e”.
Itoobiya waxaa falal iskugu jira dil, dhac boob iyo kufsi ku heysay maatada taableysan ee dalkooda ku soo xadgudubtay, sidoo kale Itoobiya waxaa ay fagaarro walba oo caalamka kamid ah ka sheegta iney jeceshay nabad ka islaaxda geyiga Soomaaliya, iyadoo taas sabab ugu dhiganeysa dowlada la’aanta Soomaaliya ka jirto iney saameyn ku yeelan karto nabadgalyada dalkeeda haddii aan xal loo helin.
Kahor ku dhawaaqistii dowladii Carte lugu soo dhisay Itoobiya arimaha Soomaaliya waxey u ahaayeen filin taxano ah oo hadba marka uu ku dhawaado gunaanad ay dib u soo celineyso, sidoo kale Itoobiya waxaa laf dhuun gashay ku noqotay dowladii halkaas lugu soo dhisay. Ayaan darrose waxey noqotay markii ay dowladaasi gudan kari weysay dhaartii beenta aheyd ee aay Carte kala timid “Ileyn dadku waa soomaali e”.
Halkaanna waxaa ka baxay hankii ay ummaddu u qabtay dowlad awood badan oo soo celisa nabadii iyo sharaftii ay Soomaaliya caalamku ku laheyd.
Nasiib darrase waxaa ay noqotay in markale la yiraahdo waxaa la shirinaya kooxaha lugu sheego siyaasiinta ee 13-kii sanno ka dhexmuuqaday siyaasadda soomaalida.
Dibindaabyada ay Itoobiya ku heyso dadka Soomaalida ah intaa oo keliya kuma koobna ee waxaa sanadkii ina dhaafay magaalada Mombasa ee dalka Kena ka dhacay qarax banbaano lala begsaday hoteel ay degenaayeen dad israa’iiliyiin ah oo dhaawac iyo dimashaba keenay. Raiisal wasaare ku sheega dalka Itoobiya ayaa isagoo maangaabnimo iyo cadaawad daran lugu yaqiinay eeda dusha ka saray dalka Soomaaliya isagoo ku sheegay in kooxo xag jira ay kasoo ababuleen.
Meles Zenaawi oo caan ku ahaa sanooyinkan danbe naceybka soomaalida ayaa ku cel celiyey in dalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin ururo xirriir la leh Al-Qaacida,markii la su’aalay in uu hayo wax cadeyn ah oo la xiriira eedeymahasi, waxa uu sheegay inaanu heyn balse ay jiraan astaamo muujinaya in raggii fuliyey falkaasi argagaxiso ay kasoo duuleen gudaha Soomaliya.
Sidoo kale Itoobiya iyo maamulka Zenawi-ba waxaa ay dhibaato joogto ah ku hayaan guud ahaan siyaasada, dhaqanka iyo jiritaanka ummada soomaaliyeed ee aan weli helin fursad ay ku dhameystaan qilaafka siyaasadeed iyo arimaha u gaarka ah.
Shirka iminka ka socda dalka Kenya ee la sheegay in lugu oo dhisayo dowlad soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka heysta arimo badan oo xal loo heli lahaa waxaa hortaagan sidii dhagaxii xukuumada Meles Zenawi ee iyadu caadeysatay iney geed dheer iyo mid gaaban u kori doonto ciribtir-ka qaranka soomaaliyeed ee loolanka loogu jiro.
Hadii ujeedada ay Itoobiya dooneyso ay tahay inaan la arag awood iyo qaran Soomaaliyeed waxaa mudan in Meles Zenawi aanu arintaasi waqti badan iskaga lumin oo uu marro wadadii ay mareen kuwii isaga talada dalkaasi kaga horeyey ee qarni iyo bar ka hor ku taami jiray baa’inta dadka iyo dalka Soomaaliyeed welina aan arintaasi meel marinteeda wax ka fulin, “Walow haddii ayan Soomaalida tashan ay iman karto iney arintaasi muddo gaaban gudaheed”
Muranka ka dhex taagan gudiga loo xilsaaray dastuurka cusub iyo dowlada la sheegay iney yeelaneyso waxaa weli si gidaar ah hortaaagan Itoobiya iyo maangaabta ay adeesataba kuwaasoo ah cadwoga gaar ahaaneed ee maanta u baahan in fiiro gaar ah loo yeesho, haddii kalena arintu ay si kale noqoneyso.
Halka ugu danbeysa ayaa waxaan ku suu gunaanadayaa qoraalkeygan in marka ay timaado xukuumad caadil ah lala xisaabtami doono shaqsiyaadkii cadowga ku ahaa dadka iyo duunyada kasokow xukuumadda Tigreera ood moodo in Soomaalidu weligeed ku jirayaan bur burka saameeyey min Qaran ilaa shacab.Hadana waxaa iman doonta xilli cidlwaba sugeyso xisaab adag haddiise ummaddu ay noqoto mid weli kala saari la’ xaasidkeeda iyo xabiibkeeda arinta Soamli Ilaahey bey leedahay
Dawacadii-se wareynta laga badiyaa waxey cuntaa waxaraha iyadoo ka faa’iideysana “erya eryda” la leeyahay, aaqirkiina keenta in laga shalaayo “ iish iish-tii tirada badneyd ee lala taagnaa xerada korkeeda”.
“Ileyn Melis-ba waxa uu ahaa dhurwaa la naash naashay oo dad badani ay ku hunguubeen Meles-ka la sheegay in 13 sanno ka hor xaqooti ku ahaa Muqdisho welina ay raadinayaa dadka aan aqoonta fiican u laheyn dawacadaasi!”
MAXAY ISLAAMKA KU DOORTEEN.... SILSILADII QORAALADA IKRAAM
Minneapolis: Maanta waxay ardayda Soomaaliyeed ee reer Minnesota u ahayd maalin farxad ah maadaam ay... Guji